Hisidina ny zotram-piaramanidina, raha mahatratra ny COVID-19 ianao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Hisidina ny zotram-piaramanidina, raha mahatratra ny COVID-19 ianao
Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Antsoina hoe Fiantohana Sky Covid Care, izay manomboka amin'ny US $ 857 farafaharatsinyUS $ 8,570 tombontsoa ho an'ny mpandeha rehetra manidina amin'ny sidina anatiny an'ny fiaramanidina March 23, 2020 ny Jona 30, 2020.
Ny firenena dia Vietnam, ny kaompania dia Vietnam. Vietjet dia handoa ny saram-piantohana mafy mba hiantohana tanteraka ny fiarovana ny mpandeha rehefa manidina amin'ny fiaramanidiny.
Ireo mpandeha dia mahazo alalana amin'ny fiantohana fiantohana sy tombontsoa avy amin'ny Vietjet ao anatin'ny 30 andro manomboka amin'ny datin'ny sidina, na inona na inona loharanom-baovao.
Mba hahafahana mahazo alalana amin'ny fiantohana, ny mpandeha dia mila manome ny fampahalalana rehetra mifanaraka amin'ny "Fepetra sy fepetra" an'i Vietjet rehefa mividy tapakila.
Ho an'ny ho avy maitso, mpisava lalana vaovao Vietjet dia mpisava lalana ihany koa amin'ny fampiharana ny programa "Protect our planet - Fly with Vietjet" hiarovana ny Tany, hampihena ny loza ateraky ny loza voajanahary sy ny valanaretina ary hanampy hitondra soatoavina sivilika sy tsara ho an'ny olona mipetraka any amin'ny toerana maro izay andehanan'i Vietjet.
Ao anatin'ny tontolo feno fisalasalana, maniry ny hitondra soatoavina maha-olona, ​​toky ho an'ny mpandeha sy ny fiarahamonina i Vietjet.